DOWNLOAD Ilyushin Il-86 FSX & FSX Steam
Ilyushin Il-86 FSX & FSX Steam HOT
Ny Ilyushin Il-86 no voalohany fiaramanidina Sovietika widebody tsipika, izany hoe manana andalana mpandeha seza tafasaraka roa aisles.
izany add-on dia tena antsipirihany sy be pitsiny, mirakitra tahirin-kevitra amin'ny teny Rosiana, Dikanteny Google afaka mandika ny lahatsoratra ho 91 fiteny ary tokony hanampy anao hahazo ny hevitry ny tahirin-kevitra.
Ny fiaramanidina dia atolotra amin'ny telo repaints: AFL-Don, Atlant-Soyuz sy Air Force (AIMAC modely).
Anisan'izany tsy manam-paharoa 3D gauges, tena feo, sy ny maro hafa.
Downloads 19 341
Nohavaozina taminy 08-09-2015
Stepan Gritsevsky, VortexMX, Kirill Konovalov, Serg Popkov. FDE amin'ny Sergey Dubovitsky